नेपाल कपडा तथा सिलाई व्यवसायी बाग्मती सचिवमा राज कार्की चयन - फ्रन्टलाईन नेपाल
नेपाल कपडा तथा सिलाई व्यवसायी बाग्मती सचिवमा राज कार्की चयन
७ चैत्र २०७६, शुक्रबार २१:४२ March 20, 2020 फ्रन्टलाईन नेपाल Comment(0)
काठमाडौं, ६ चैत । नेपाल कपडा तथा सिलाई व्यवावसायी बाग्मती सचिवमा राज कार्की चयन भएका छन् । कपडा व्यवसायमा आवद्ध कार्कीलाई महासंघको बाग्मती प्रदेश कमिटिले सचिवमा नियुक्त गरेको छ ।
कार्कीले काठमाडौं, नरदेवीस्थित राजश्री कलेक्सन सञ्चालन गरिरहेका छन् । कपडा तथा सिलाई व्यवसायीहरुको हक र हितका लागी काम गर्ने उनले फ्रन्टलाइन नेपालसंग बताए ।
७ चैत्र २०७४, बुधबार १३:३५ March 21, 2018 फ्रन्टलाईन नेपाल
काठमाण्डु, चैत ७ – रोबोर्ट सोफिया बुधबार बिहान काठमाण्डुको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भएकी छिन् । राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा अयोजित ‘सार्वजनिक सेवाका लागि प्रविधि’ विषयक सम्मेलनमा उनले मन्तव्य दिइन् । प्रविधि र शिक्षाको विकासले नेपालजस्ता देशहरुले फाइदा लिन सक्ने उनले बताइन् । सोफिया मानिससरह नागरिकता पाउने पहिलो रोबोट हुन् । उनलाई साउदी अरबले […]
हुवावे भन्छ : उपभोक्ताले चिन्ता लिनु पर्दैन”
१७ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १६:४८ May 31, 2019 फ्रन्टलाईन नेपाल
काठमाडौं, जेठ १७ । अब हाम्रो स्मार्टफोनको भविष्य के हुन्छ ? ह्वावेको भविष्य के हुन्छ ? आउने स्मार्टफोनको के हुन्छ ?’ हुवावेका स्मार्टफोन प्रयोग गर्ने विश्वका करोडौं उपभोक्ताको जिज्ञासा मेटाउनमै दुई सातादेखि व्यस्त छन् ह्वावेका अधिकारीहरू । यीनै प्रश्नको सेरोफेरोमा विश्वभरका मिडियाका सामग्रीहरू पनि केन्द्रीत छन् । तर, अब भने प्रश्नको उत्तर हैन, प्रतिप्रश्न गर्न […]
११ चैत्र २०७५, सोमबार ०८:५३ March 25, 2019 फ्रन्टलाईन नेपाल
चैत ११ , काठमाडौं । बार्सिलोना स्पेनिस फुटबलको सबैभन्दा सफल क्लब हो । बार्सिलोनाले क्लब फुटबलका प्राय सबै उपाधिहरु चुमिसकेको छ । बार्सिलोनाले २५ पटक स्पेनिस लालिगा, ३० कोपा डेल रे, १३ सुपर कप, ५ च्याम्पियन्स लिग, ५ युईएफए सुपर कप र ३ पटक फिफा क्लब विश्वकप जिति सकेको छ । अन्य घरेलु कप तथा युरोपियन […]
खल्तीबाट ४० भन्दा बढी बैंकहरुमा नि : शूल्क रकम पठाउन सकिने
एक सातासम्म घर बाहिर निस्कन नपाइने